Mapato Opesana Mukunyorwa kweBumbiro Idzva
Zanu PF inoti sarudzo ngadziitwe gore rino, MDC-T ichiti dziitwe gore rinouya
Sachigaro veZANU-PF, Va Simon Khaya Moyo, vanoti kunyorwa kwebumbiro idzva kunofanirwa kuitwa nechimbi chimbi, kuitira kuti sarudzo dziitwe gore rino risati rapera.
Vachitaura pamusangano wavakaita nemumiriri we Netherlands muZimbabwe, VaMoyo vakati bato ravo rinoda kuti kunyorwa kwebumbiro idzva kupere nekukurumidza kuitira kuti munyika muitwe sarudzo.
VaMoyo vakati MDC iri kudzosera kumashure chido che ZANU-PFchekuti kunyorwa kwebumbiro idzva kupedzwe.
Vakataurawo pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. VaMoyo vakashoropodzawo nhepfenyuro dziri kutepfenyura dziri kunze kwenyika, vachiti dziri kukonzera kusagadzikana munyika.
Mashoko aVa Moyo anouya apo vari kutungamira hurongwa hwekuisa zvakabva muvanhu mumadingidira akasiyana siyana, vari kupepeta zvichange zviri mubumbiro idzva.
Va Paul Mangwana ndivo mumwe wemasachigaro eCOPAC uye vachimirira ZANU-PF. Va Mangwana vanoti MDC, kuburikidza negurukota rezvemari, Va Tendai Biti, havasi kuda kupa COPAC mari inodiwa kuitira kuti basa rekunyorwa kwebumbiro idzva ripere gore rino.
Pane kusawirirana kukuru pakati peZANU-PF neMDC panguva dzinofanirwa kuitwa sarudzo munyika.
MDC inoti hazviite kuti sarudzo dziitwe gore rino nekuti hapana mari inodiwa kuti basa iri ripere. Mumwe wevatevedzeri vemasachigaro e COPAC, Amai Gladys Gombami-Dube, ve MDC-T vanoti kutaura kwaVa Moyo kungotaurawo nekuti kunyorwa kwebumbiro idzva kuchatora nguva yakati rebei.
Hurukuro naVa Paul Mangwana